A tọhapụrụ Istanbul Adalar na mkpo ụgbọ njem | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulWepụtara Istanbul Adalar na mkpo ụgbọ njem
21 / 01 / 2020 34 Istanbul, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, VIDEO
Agwaetiti Istanbul kpochapụrụ ihe mkpofu phaeton
Na Buyukada, bụ onye na-alụso ọrịa ọgụ ọgụ n'izu ndị na-adịbeghị anya, mkpochapụ nke usoro site n'aka ndị ọbịa bụ nke ndị IMM kpochapụrụ. Ngụkọta mkpokọta ruru iri abụọ na ise anakọtara n'ụgbọ ahụ ma kwaga ebe a na-ebufu ahihia na Istanbul.
Obodo isi obodo Istanbul (IMM) emeela ka ọrụ nhicha nke obodo rụọ ọrụ ngwa ngwa mgbe oke ide mmiri dapụtara na izu ndị gara aga. Followinggbaso n'ụsọ osimiri Kilyos, İBB enyemaka İSTAÇ, nke tụgharịrị ụzọ ya na Adalarị, si enweta ihe ruru 25 mkpofu ahịhịa na Büyükada.
Ndị otu İBB Sanitary Directorate bu ụzọ kagbuo ụlọ ọba akwụkwọ 14 n'ime ụlọ 140 nwere İSPARK stables na Buyukada. Emebigharịrị barn ndị ọzọ mgbe ndị otu aka gachara. Enwekwara nhicha na mgbochi nke ogige dị n'ọba site na nhichapu igwe na-asa ahụ nke Direlọ Ọrụ Ugbo Nkụzi nyere.
İSTAÇ kpochara ụsọ mmiri yana ụlọ ọrụ ịnyịnya dị na Buyukada n'oge ọrụ nhicha nke ọ malitere 5 izu gara aga site na ụgbọ ala 30 na otu ìgwè mmadụ 1. A rụrụ ọrụ nhicha na nrịgo nke İSPARK stables na-ezute oke osimiri. N'ime ogo nke ihe omumu a, a na-anakọta mkpo 5 nke ihe mkpofu na obere akpa nylon 25. A tụfuru ihe mkpofu ahụ n'ụgbọ ahụ ma kwaga ebe a na-ere ahihia na Istanbul.
E jiri ọsụsọ na washinggbọala na-asacha ụgbọ elu asachapụ okporo ụzọ Buyukada. Ya na ọgwụ ndị a na-etinye na mmiri mmiri, a na-ehichapu ihe eji asa ahụ.
Ihicha na mgbochi nke ihe na-ere ịnyịnya na Heybeliada na Burgazada malitere taa. Ndị ọrụ 17 na ndị ọrụ 80 na-arụ ọrụ ahụ.
Aha ndị e debara aha ha na agwaetiti ndị a bufere ka IMM
Nwa na-eto eto Thai lanarịrị n'okpuru ụgbọ oloko ahụ
IMM iji hazie 'Islands Transport Workshop' na 28 August
Ebe a na-ejikwa ụgbọ okporo ígwè eme njem na Islands
Ụgbọ okporo ígwè Boluda ma ọ bụ ụgbọ ịnyịnya
Oge 'Alo Fayton' na İzmir
Oge mmepe nke Phaeton Emechibidoro na İzmir
Ụgbọ njem na uzo natara na Alanya
Karşıyakana Anyịnya na Zụrụ na Turkey
Tram lanarịrị ihe mberede na Eskisehir
Ọdụ ụgbọ okporo ígwè anwụọla na nke abụọ na ọnwụ (Video) | Spain
Enye ama ọbọhọ ke ndisụhọde ke ọkpọsọn̄ ukpepn̄kpọ
Ahapụrụ Büyükada Ego Cartement
Emeela ka ụlọ nhichapụ nke phaeton na Buyukada